I-Internet Explorer icabanga kabusha ukusetshenziswa kwayo | Martech Zone
IE7 inamandla amakhulu, kepha ngiphinde ngabhala ukuthi kungani ngikholelwa ukuthi ilahlekelwa isheya lemakethe futhi iyakhathaza umsebenzisi ojwayelekile ukuthi ayisebenzise… ikakhulukazi uhlelo lwemenyu olusuka ngakwesokunxele nangakwesokudla kakhulu kohlelo lokusebenza.
Ngabhala ngakho IE7 futhi kuyasebenziseka okwesabekayo ngaphezulu kancane kwenyanga edlule. Kubonakala ifayili le- Ithimba le-IE selicabange kabusha isu lalo ngokukhishwa kwesondlo okuzayo kwe-IE7. Ibha yemenyu manje izokhonjiswa ngokuzenzakalela.
Ngaphambi kokuba ucabange ukuthi ngiyazishaya emhlane, kufanele wazi ukuthi mina am ngijabule ngokuthi IE iphume emingceleni ejwayelekile futhi yazama i-new paradigm yomsebenzisi. Inkinga yami ukuthi anginasiqiniseko sokuthi bake bayihlola ngokuphelele leyo paradigm ngaphambi kokuyikhipha.
Ngicabanga ukuthi kungaba isu elihle kakhulu ukuthi iqembu lethule isikhombimsebenzisi sebhebhoni nokusebenza kwe-'Office Button 'okungukuthi, I-IMHO, isinyathelo esinqabileyo esiya phambili ekusebenzeni ku-Office 2007. Bekungeke nje kuphela ukuthi kuthuthukise ukusetshenziswa kwesiphequluli, kungasihlukanisa nomncintiswano, kungenise abantu ku-interface ye-ribbon - mhlawumbe ukuthola ukutholwa okwengeziwe, futhi kuzoletha umkhiqizo weMicrosoft ngaphezulu ngokuhambisana nawo wonke umndeni.
Vele, ngikholelwa ukuthi isiphequluli esizokhipha umncintiswano kuqala kuzoba yi isiphequluli esethula kakhulu izingxenye 'zesebhokisini' zomsebenzisi. Ngaphandle kwanoma yisiphi isidingo sokulanda, uma bengingahlelela i-datagrid, isihleli se-HTML, ingxenye yekhalenda, ukukhohlisa kwesithombe… ngamathegi nezitayela ze-xhtml zomdabu, ngingahlakulela izinhlelo zokusebenza zaleso siphequluli ngaphambi kwanoma yisiphi esinye!
Tags: Ukukhangisa ku-FacebookI-Google + YamadummiesHollis ThomasesUJesse HlalaQalisaI-Social Media Examiner
Kulungile ukwenqaba ukuphawula okungalungile